Pejy fandokoana kisoa maimaimpoana
Boky fandokoana kisoa
Kisoa sary fandokoana
Na izany aza, zava-dehibe foana ny pejy fandokoana atolotra dia natao tamin'ny fomba mety amin'ny ankizy. Satria ny sary fandokoana mifanaraka amin'ny taonany sy ny antony tsara mety hahatonga ny ankizy ho vonona hirotsaka amin'ny fandokoana. Ary eo indrindra no nidiran'ny fanoloranay ho an'ny pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy. Ary ny zava-drehetra mifandraika amin'ny biby fiompy toy ny kisoa dia mety amin'ny ankizy kely foana. Ny fikitihana ny rohy dia manokatra ilay pejy miaraka amina modely fandokoana voafantina:
Mamafaza amin'ny zana-kisoa
Teny lakile fanampiny: kisoa, kisoa, alika, alika
Boky fandokoana famantaranandro sy famantaranandro
Pejy fandokoana Taom-baovao & Taom-baovao
Boky fandokoana ny sampana mpamono afo
Pejy fandokoana piraty
Pejy fandokoana Mangas Anime
Fivavahana jiosy - boky fandokoana fivavahana